Alakamisy 4 Martsa 2021
Dite Mpanao Ny serenity dia mpanamboatra dite amin'ny maoderina izay mifantoka amin'ny traikefa falifaly mpampiasa. Ny tetikasa dia mifantoka amin'ny singa aestetika sy ny traikefan'ny mpampiasa satria ny tanjona voalohany dia manondro ny vokatra tsy hitovy amin'ny vokatra efa misy. Ny fofon'ny mpanamboatra dite dia kely noho ny vatana izay mamela ny vokatra mijery ny tany izay mitondra maha-izy azy manokana. Ny vatana miorim-bolo somary mifangaro amin'ny alàlan'ny masirasira dia manohana ihany koa ny maha-izy azy manokana.
Alahady 28 Febroary 2021
Chandelier Ny Lory Duck dia namboarina ho toy ny rafitra fampiatoana miangona avy amin'ireo modules vita amin'ny varahina varahina sy epoxy, samy mitovy amin'ny alika mihetsika amin'ny alàlan'ny rano mangatsiaka izy ireo. Ny maoderina koa dia manolotra fanamafisana; miaraka amin'ny fanitsiana, ny tsirairay dia azo ampifanarahana mba hiatrehana ny lalana rehetra ary ahantona amin'ny haavony rehetra. Ny endrik'ilay jiro dia teraka teraka haingana. Na izany aza, dia mila fikarohana sy fampivoarana volana maro niaraka tamin'ny prototypes tsy tambo isaina hananganana ny fandanjalanjana tonga lafatra sy ny fijery tsara indrindra amin'ny zoro mety ho azo atao rehetra.
Asabotsy 27 Febroary 2021
Boaty Mitombo Vita Tamim-Pahombiazana Trano Fiangonana Ny Kodiarana Fiovana Dite Mpanao Chandelier Ny Fanangonana Ny Vehivavy